भुस्याहा बिरालोलाई सेक्योरिटी गार्डको जागिर ! - नागरिक रैबार
भुस्याहा बिरालोलाई सेक्योरिटी गार्डको जागिर !
आइतवार, भदौ १४, २०७७
काठमाडौं । अहिले संसारमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस महामारीका कारण करोडौँ मानिसहरुले आफ्नो जागिर तथा व्यवसाय गुमाएर बेरोजगार बनिरहेका छन् । तर मानिसहरुले रोजगारी गुमाइरहेको यो मौकामा अष्ट्रेलियामा चाहिँ एउटा बिरालोले गज्जबको जागिर पाएको छ ।
कसैकोमा पनि नपालिएको अर्थात् भुस्याहा वा छाडा अवस्थामा रहेको एक बिरालोलाई अष्ट्रेलियाको एपवर्थ अस्पतालले सुरक्षा गार्डको जागिर दिएको हो ।
रिपोर्ट अनुसार उक्त बिरालोको नाम एलउड हो । उसलाई रिचमण्ड सहरस्थित एपवर्थ अस्पतालले सेक्योरिटी गार्डको रुपमा भर्ना गरी काममा खटाएको छ ।
अस्पताल प्रशासन उक्त सुरक्षा गार्ड बिरालोलाई बकाइदा एउटा परिचयपत्रसमेत दिएको छ, जसमा उसको फोटो, उसको नाम तथा कामसमेत उल्लेख छ । ड्युटीमा रहेको बेला एलउडले उक्त परिचयपत्र आफ्नो घाँटीमा भिर्ने गर्दछ ।
एपवर्थ अस्पतालमा प्याथोलोजिष्टको काम गरिरहेका च्यान्टेल ट्रोलिपका अनुसार उक्त बिरालो पछिल्लो एक वर्षदेखि अस्पतालको मुख्य गेटको आसपास यत्तिकै घुम्ने गर्दथ्यो । सो बिरालो कसैले पालेको बिरालो नभएको हुँदा त्यसको बस्ने ठेगान पनि थिएन । दिनहुँ अस्पतालको मुख्य गेटमा आएर यताउता गर्ने उक्त बिरालोमाथि अस्पतालका कर्मचारीको नजर पर्यो । त्यसपछि त्यसलाई अस्पतालले नै पाल्ने र सुरक्षा गार्डका रुपमा खटाउने आइडिया फुर्यो ।
सुरक्षा गार्डको रुपमा भर्ना गरिएको एलउडले तलब कति पाउला ? उसलाई कुनै नगद तलब भत्ता दिनु पर्दैन । मिठो–मिठो खानेकुरा, मज्जाको हेरचाह र बसोबास नै उसको तलब हो ।
भर्चुअल बैठकमा गृहमन्त्रीको गुनासो : ब्यारेक र जेलमा कोरोना बढ्यो
विरासतको छाता ओढेर नेतृत्व परिवर्तनको हुङ्कार
भक्तपुर । मध्यपुर थिमिको विभिन्न स्थानमा केही समय यता श्रृंखलावद्ध रुपमा अमेरिकी डलर देखाई विभिन्न व्यवसायी, व्यापारी र विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले एक महिलासहित पाँचजनालाई शुक्रवार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरुमा सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–३ घर भई हाल काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ बस्ने ३६ वर्षीय खेलबहादुर तामाङ र ३३ वर्षीय रेलबहादुर तामाङ […]
काठमाडौं । नेपाली सेनाले यस वर्षको मनसुन शुरु भएयता मुलुकका विभिन्न भागमा गएको बाढी, पहिरो र अरु प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा परी ज्यान गुमाएका २३४ जनाको शव व्यवस्थापन गरेको छ । सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार उक्त अवधिमा त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट अप्ठेरामा परेका ३९९ जनाको जीवित उद्धार गरिएको छ । सेनाले घटना अप्ठेरामा परेका […]
तनहुँ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँका सामुदायिक विद्यालयले टोल–टोलमै पुगेर विद्यार्थी पढाउन थालेका छन् । कोभिड–१९ का कारण विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा सिकाई सहजीकरण गर्न विद्यालयले टोलमै पुगेर विद्यार्थी पढाउन थालेका हुन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–९ स्थित तालवेशी माध्यमिक विद्यालयले टोल–टोलमा पुगेर विद्यार्थी पढाउन सिकाई केन्द्र स्थापना गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाई […]
जगन्नाथकी गर्भवती महिलाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार
रामबहादुर विक/बाजुरा ९ असोज। जिल्लाको जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नं २ बाट एक गर्भवती महिलाको उद्धार गरिएको छ । वडा नं २ की २१ बर्षिया केशपुरा सार्कीलाई शुक्रबार हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको जगनाथ गाँउपालिकाका प्रवक्ता डवल बहादुर बिकले बताउनु भएको छ । गर्भवती सार्की घरमा सूत्केरी हुन नसकेपछी कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी गराउन ल्याईको थियो […]